Ihe Ọ Pụtara Ịbụ Nnu na Ìhè, Nkebi nke 3 (Naanị Mgbasa Ozi Ọma nke Jizọs, Ụbọchị 220 kemgbe Jan 20, 2017 / Day 587 kemgbe Jan 1, 2016)
TEXT: Matiu 5: 13-16:
13 Unu onwe-unu bu nnu nke uwa: ma ọ buru na nnu efusiwo nnu, n'ìhi gini ka agēme ka ọ di utọ? ọ gaghi-adi nma ma-ọli rue mb͕e ebighi-ebi gara aga, kama ka achupu ya, ka madu we zọda ha.
Unu onwe-unu bu ìhè nke uwa. A pụghị izobe obodo a na-edebe n'elu ugwu.
15 Ma ọ dighi madu ọ bula nēnye oriọna, tiye ya n'okpuru ihe-idọba-oriọna, kama n'elu ihe-idọba-oriọna; ọ na-enyekwa ndị niile nọ n'ụlọ ahụ ìhè.
16 Ya mere ka ìhè-unu nēnye ìhè n'iru madu, ka ha we hu ọlu ọma nile unu, ka ha we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.
Mgbe ikwusara Oziọma kwa ụbọchị ruo ụbọchị 367 n'usoro mgbasa ozi nke afọ 2016, ana m ekwusa Oziọma kwa ụbọchị n'ụbọchị 100 mbụ nke okwu President Donald Trump. Ọ bụrụ na ịchọrọ na onyeisi oche ọhụrụ nọ n'ọfịs bụ nanị ihe dị mkpa iji zọpụta America ma 'mee ka America dị ukwuu', a na-eduhie gị n'ụzọ ọjọọ. Chọọchị aghaghị ịgbaso ma "buru isi ihe bụ isi: nke ahụ na-eru ndị na-ekweghị ekwe na Oziọma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na-ekpe ekpere maka nzọpụta ha, n'ihi na nsogbu ahụ na America abụghị nanị ndị isi nupụ isi, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ndị mmadụ, ma ndi ndi ozuzu aturu, ndi nkwusa, na ndi uka ndi nenweghi ike irube isi n'iwu uku nke Onyenwe anyi, nke bu, 'Gaanụ n'ime uwa nile, kwusaa ozi oma nye ndi nile ekere eke,' ma ha ekweghi irube isi n'iwu Chineke nyere 'ikpe ekpere n'enweghị ihe ọ bụla 'maka ndị na-ekweghị ekwe, ndị kwere ekwe, na ndị ndú ndọrọ ndọrọ ọchịchị. " Ya mere, anyị na-agba gị ume ka ị na-ekpe ekpere maka onyeisi oche ọhụrụ ahụ, mana ịghara ijide onwe gị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ụwa na-eme. Ọ dịghị ihe ọ bụla ga-agbanwe ruo mgbe ndị mmadụ ga-azọpụta ma mee ka obi ha dị mma n'ebe Onyenwe anyị nọ. Nke ahụ bụ ihe mkpọsa a bụ maka.
Ntughari a bu nke sitere n'amaokwu ato ndi a: 1 Ndi Kọrịnt 2: 2 nke na-ekwu, "N'ihi na m kpebiri na m gaghị ama ihe ọ bụla n'etiti unu, ma ọ bụghị Jizọs Kraịst, na onye a kpọgidere n'obe." Ọrụ 5:42 nke na-asị, "Kwa ụbọchị kwa n'ụlọ nsọ, na n'ụlọ ọ bụla, ha kwụsịrị ịkụzi ma kwusaa Jizọs Kraịst." Na 2 Timoti 2: 4, nke na-asị, "Ọ dịghị onye ọ bụla nke na-alụ ọgụ na-etinye onwe ya n'ihe banyere ndụ a, ka o wee mee onye na-eme ya obi ụtọ ka ọ bụrụ onye agha."
Usoro a abụghị maka Ndị Kraịst. Ma, enwere m olile anya na ị bụ otu n'ime ndị nsọ ahụ bụ ndị ka na-anụ ịnụ "Old, old story of Jesus and His love" - ​​Dị ka abụ ọzọ si kwuo, "Maka ndị maara ya kacha mma Ọ na-agụ agụụ ma na-agụ agụụ ịnụ ya ezumike ahụ." Usoro a bu nke ndi na-ekwegh ekwe, ya mere ha puru inu ma ghota ozioma ma we zoputa ha na nmehie na ntaramahuhu nke nmehie nke ala mo. Nke a bụ nọmba ozi 220 kemgbe Jan 20, 2017, ụbọchị 587 ebe Jan 1, 2016.
G.V. Wigram kwuru, "n'oge na-adịghị anya, anyị ga-eso Kraịst nọrọ n'ebe ahụ." Chineke apụtaghị na anyị ga-enwe obi ụtọ n'amaghị Ya, ma Chineke ga-ebu ụzọ buru anyị ndị àmà maka Ya ebe a, ka anyị jidekwa ìhè dị ka anyị nwere ike. "
Jis] s ekwup ta na anyŽ b ìhè nke wa. Mana ole n'ime anyị na-enwu gbaa? Mmadụ ole n'ime anyị zoro ìhè anyị? Ọ bụrụ na anyị bụ ọkụ, ọ bụ ihe na-adịghị mma ka ị ghara ịcha. Jis] s sŽrŽ, "Ma] b ghŽ mmadu n ° tinye oriọna, wee debe ya n'okpuru mbadamba ihe, kama n'elu oriọna oriọna,] g ° nye kwa ndi nile n] n'ulo." N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ Ndị Kraịst taa adịghị enwu.
Kedu ụzọ ụfọdụ anyị si ezo ìhè anyị?
Nke mbụ, anyị na-ezobe ìhè anyị site n'ịkekọrịta Oziọma ahụ. Olee mgbe ikpeazụ ị gwara mmadụ banyere Jizọs? Kedu oge ikpeazụ ị gafere traktị Oziọma? Dịka NdụWay Research si kwuo, pasent 75 nke Ndị Kraịst nile ejighị òkè ọzọ kerịta Oziọma ahụ karịa ugboro abụọ ebe ọ bụ na a zọpụtala ha. Ụzọ kachasị mma nke ịbụ nnu na ìhè n'ụwa bụ ịgwa ndị mmadụ banyere Ìhè nke Ụwa.
Nke abụọ, anyị na-ezobe ìhè anyị mgbe anyị bi n'ime mmehie. Ibi n'ime mmehie na-eme ka obi anyị sie ike maka Oziọma ahụ ma mee ka ìhè anyị daa. Anyị apụghị ikwusa na Jizọs na-azọpụta ndị mmadụ n'agbụ nke mmehie mgbe anyị onwe anyị na-eme ka à ga-asị na a tọhapụghị anyị. N'elu nke a, anyị apụghị igosi ụwa ụwa ka mma ma ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ dị ka ụzọ ụwa si dị.
Nke atọ, anyị na-ezobe ìhè anyị site n'ịnọghị ịbụ ezi ndị òtù nke ọha mmadụ na-etinye anyị n'ime ya. Mgbe ọ na-amalite usoro Ụlọ Akwụkwọ Liberty, Jerry Falwell kwuru otu oge, "Ọ bụrụ na ọ bụ Onye Kraịst, ọ ghaghị ịdị mma." A pụrụ itinye okwu ahụ n'ọrụ n'akụkụ niile nke ndụ anyị dịka Ndị Kraịst. Ìhè nke ụwa kwesịrị ịbụ ndị agbata obi ka mma, ezigbo ndị enyi, ndị ọrụ ka mma, ndị ka mma, ndị di na nwunye di mma, ụmụ akwụkwọ ka mma, ndị nkụzi ka mma. Nke a apụtaghị na anyị ga-abụ ndị maara nke ọma, ndị gụkwuworo akwụkwọ, ma ọ bụ ndị maara ihe karịa ndị ọzọ. Ihe ọ pụtara bụ na, na mkparịta ụka ọ bụla, anyị ga-egosi ịhụnanya Kraịst, nchegbu, na ọmịiko n'ebe mmadụ nile nọ.
Gị na m bụ ọkụ nke ụwa a. Nabata ọrụ Jizọs nyere anyị ka anyị bụrụ ndị na-enwu ìhè n'ọchịchịrị. Na-enwu! Ezobela ìhè gị. Tinye ya na oriọna ma jide ya ka ndị ọzọ wee hụ na a ga-azọpụta ya.
Dị ka Philip P. Bliss dere, anyị bụ "ọkụ ala" nke ga-ere ọkụ iji zọpụta ndị mmehie site na mbibi ụfọdụ:
Mee ka obi ebere nke Nna anyi,
Site na ụlọ ọkụ ya ruo mgbe ebighị ebi,
Ma nye anyị Ọ na-enye nchebe
Nke ọkụ na n'ikpere mmiri.
Ọchịchịrị n'abalị nke mmehie emeela,
Onye-nwe-ayi nāb͕a ọsọ;
Anya anya na-ekiri, agụụ,
Maka ọkụ dị n'akụkụ osimiri.
Kwuo oriọna gị, nwa m nwoke;
Ụfọdụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ndị oké ifufe,
Na-agbalị ugbu a ime ka ọdụ ụgbọ mmiri ahụ,
Ọchịchịrị nwere ike ịla n'iyi.
Ka obere ọkụ na-ere ọkụ!
Zipụ gleam gafere efegharị ahụ!
Ụfọdụ ndị dara ogbenye na-agbasi mbọ ike
Ị nwere ike ịzọpụta, ị nwere ike ịchekwa.
Ugbu a, maka ndị nke ị na-adịghị azọpụta, cheta na Jizọs bụ ìhè nke ụwa. Ọ bịara na-enwu n'ọchịchịrị gị na ịzọpụta mkpụrụ obi gị. Kwe ka m gosi gị otu ị ga-esi nweta Ya dịka Onyenzọpụta gị.
Akpa, kweta na ị bụ onye mmehie, nakwa na ị mebiri iwu Chineke. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Ndị Rom 3:23: "N'ihi na mmadụ nile emehiewo ma ghara iru ebube Chineke."
Nke atọ, nabata eziokwu ahụ na ị nọ n'okporo ụzọ hell. Jizọs Kraịst kwuru na Matiu 10:28: "Unu atụkwala egwu ndị na-egbu ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi: mana kama ịtụ egwu onye ahụ nke nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi ma ahụ na hel." Ọzọkwa, Bible na-ekwu na Mkpughe 21: 8: "Ma ndị na-atụ egwu, na ndị na-ekweghị ekwe, na ndị na-asọ oyi, na ndị na-egbu ọchụ, na ndị na-akwa iko na ndị dibịa afa, na ndị na-ekpere arụsị, na ndị ụgha niile, ga-ha akụkụ n'ime ọdọ nke na-ere ọkụ na brimstone: nke bụ ọnwụ nke abụọ. "
Ugbu a bụ akụkọ ọjọọ, mana ozi ọma a bụ. Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 3:16: "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi." Naanị kwenye n'obi gị na Jizọs Kraịst nwụrụ maka mmehie gị, e liri ya, ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ike nke Chineke maka gị ka i wee nwee ike ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi na Ya. Kpee ekpere ma rio Ya ka o bata n'obi gi taa, ma O ga.
Ọ bụrụ na ị kwenyere nà Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe maka mmehie gị, e liri ya ma bilie na ndị nwụrụ anwụ, ma ịchọrọ ịtụkwasị Ya obi maka nzọpụta gị taa, biko kpeere m ekpere a dị mfe: Nna dị nsọ bụ Chineke, ana m aghọta na m m bụ onye mmehie nakwa na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ na ndụ m. Enwere m mwute maka mmehie m, ma taa, m na-ahọrọ ịhapụ mmehie m. Maka Jisos Kraist, biko gbaghara m nmehie m. Ekwenyere m na obi m nile na Jizọs Kraịst nwụrụ maka m, e liri ya, ma bilie ọzọ. M tụkwasịrị obi na Jizọs Kraịst dịka Onye Nzọpụta m, m na-ahọrọ ịgbaso Ya dịka Onyenwe anyị site n'ụbọchị a gaa n'ihu. Onyenwe anyi Jisos, biko bata n'ime obi m wee zoputa nkpuru obi m ma gbanwee ndu m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị kwenyere n'ime obi gị na Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe, e liri ya ma bilie ọzọ, kwe ka m kwuo, ekele maka ime ihe kachasị mkpa ná ndụ, nke ahụ bụ ịnakwere Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta na Onyenwe gị! Maka ozi ndị ọzọ iji nyere gị aka ito eto na okwukwe ọhụrụ gị n'ime Kraịst, gaa Oziọma Light Society.com ma gụọ "Ihe Ị Ga-eme Mgbe Ị Banyesịrị n'Ụzọ". Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ: site na m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla abata, ọ ga-azọpụta, na ga na-aga na na, na-achọta ịta nri."
Ọ bụrụ na ị nakwere Jesus Christ dịka Onyenzọpụta gị taa, biko kpọtụrụ m na dw3@gospellightsociety.com ma mee ka anyị mara. E nwere ụfọdụ ihe onwunwe n'efu anyị chọrọ iziga gị. Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ekpere, biko na-ezigara anyị na anyị, anyị ga-ekpekwa ekpere maka gị ruo mgbe ị gwara anyị ka anyị kwụsị.